Actualismo: ihe ọ bụ, ihe ọ na-agbachitere na mkpa ọ dị | Netwọk Mgbasa Ozi
Dịka e kwuru n’isiokwu ụfọdụ, afọ ụwa ga-adị n’agbata ijeri 4.400 na 5.100. A na-ekpebi tiori a site na iji usoro mmekọrịta mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-ekele ekele maka ozi na ihe enwere ike ịpụta site na meteorites. Ihe akaebe maka nke a na-agbanwe agbanwe, ya mere enwere ike ịsị na nke a bụ mmalite nke .wa. Iji kọwaa ihe niile mere na ụwa anyị a, ndị n'ezie. Ọ bụ iwu gbadoro ụkwụ na nkwenye na ihe ndị merela na akụkọ ntolite bụ otu ihe na-eme ugbu a.
N'isiokwu a, anyị ga-arụpụta ihe ezigbo ihe bụ, ihe njirimara ya na etu o si dị mkpa.
1 Gịnị bụ n'ezie
3 Eziokwu ndu
4 Akụkọ banyere ala banyere ihe mere eme
Gịnị bụ n'ezie
Ọ bụ ụkpụrụ James Hutton nyere na nke mepụtara ọzọ Charles Lyell nke emere ka o guzosie ike na usoro ndị a meworo n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa yiri nke a na-eme taa. N'ihi ya a na-akpọ tiori a n'ezie.
A na-ahụkwa eziokwu a dị ka ihe na-emebi emebi. Ọ bụ na ọdịdị ala nke ụwa taa na-etolite na mberede n'oge gara aga ekele maka mgbanwe na mgbanwe. Offọdụ n'ime ngwaọrụ ndị kachasị mkpa nke ịkọwa eziokwu na otu ụdị ọrụ si ewepụta ihe ọmụma site na oge gara aga bụ ịkọwapụta ihe nkedo, usoro ọdịmma na usoro ihe omume ma n'oge gara aga ma na mgbanwe nke ugbu a.
E gosipụtara iwu a na narị afọ XNUMX na mmalite nke narị afọ nke XNUMX. Ọ bụ ndị omenaala nwere ike inyocha eziokwu ahụ site n'inyocha mbara ụwa. Ndị ọkà mmụta ihe ndị a kwadoro ma kwado onwe ha na eziokwu ndị a ka ha nwee ike ịghọta usoro ọmụmụ nke mbara ala na mgbanwe ya niile. N'ụzọ ezi uche dị na ya ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. Gini mere usoro a ga - eji gbanwee oge? Patternskpụrụ nke mgbanwe ikuku, ala, ihe omumu banyere ala, wdg. Ha bụ ndị ahụ mere ihe na mbido ihe niile.
Have ga-achọpụta na tupu ikuku ahụ enweghị otu ihe ahụ. Mana ọ bụ na, rue taa, a na-agbanwekwa ihe mejupụtara ya. Ma eleghị anya, ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke geological oge nke na-eme ka anyị chee na tupu ihe omume ala ndị ọzọ emee karịa ugbu a. Ifufe, ebili mmiri, mmiri ozuzo, oké ifufe, wdg. Ha mekwara mgbe ụwa malitere.
Ya mere, ihe na-eme ugbu a na-agbachitere bụ nke ahụ ọ bụ otu ihe ndị a na-agbanwe ụwa ma mee ka ọ gbanwee, ma ruo taa, ha ka na-enwe mmetụta ma na-eme ihe.
A kọwara usoro nke ọdịdị ala na nsị n'ụzọ dị otú a site na omume nke mmiri, ifufe na ebili mmiri nke ha nyochara na nke ha nwere ike ịlele mmetụta ọ bụla kwa ụbọchị. Ndị kwadoro catastrophism, megidere echiche nke eziokwu, ebe ha na-agbachitere na nnukwu ndagwurugwu, usoro ala na mmiri mmiri. ha abịawo site na egwu cataclysms na n'oge gara aga.
Enwere ike ịchọta ha na ederede okpukpe dịka Baibul na Iju Mmiri ya nke enwere ike ịkọwa dị ka ihe kpatara nnukwu mmiri ozuzo megidere ala ndagwurugwu. Ifdị n'otu dịkwa n'otu n'ime ihe a niile. Ọ bụ sayensi sayensị ala ebe ihe ọmụmụ ya na-ekwu na usoro dị ugbu a ejirila nwayọ nwayọ. Na mgbakwunye, ha bụ ihe kpatara njirimara ọdịdị ala nke ụwa anyị nwere. Ihe otu ihe na-agbachitere bụ na a nọgidere na-arụ ọrụ ndị a ruo taa na-enweghị mgbanwe.
O bu ụkpụrụ na-akwado mmekọrịta dị n’etiti ndị dị ndụ ugbu a na ndị nke gboo. Ihe bụ eziokwu, ihe na-eme ka ọ dị ndụ na-ekwusi ike na usoro ndị ihe ndị dị ndụ na-eme taa ka emekwara n'oge gara aga. Na ọ dịghị nke ọ bụla agbanweela ruo ugbu a.
Ime ka o dokwuo anya ma dịkwa mfe nghọta. Ọ bụrụ na otu ụdị ume wee mụta nwa, ọ ga-abụ na usoro ndị a mekwara ọtụtụ nde afọ gara aga. Yabụ, ọ bụrụ na anyị jikọtara nke a na usoro ihe ọmụmụ ala, anyị ga-ekwenye na otu usoro a na-eme oge niile na ọ nweghị nke gbanwere taa. Ọ bụ eziokwu na usoro ndị a enweela nuances ha, nyere na ndị dị ndụ ga-enwerịrị ọnọdụ na ọnọdụ ọhụụ nke ndị ọrụ nchịkwa onwe ha gbanwere kemgbe ọtụtụ afọ.
Otú ọ dị, ọ bụ ezie na nuances na-agbanwe, a na-asọpụrụ isi nke usoro ahụ, ya bụ, a na-eku ume ma ha mụta nwa. Ihe omuma nke ndu na-emetụta usoro dika mmeputakwa na metabolism. Ihe amalitela ịgbanwe mgbe anyị na-ekwu maka akparamagwa nke ihe ndị dị ndụ. N'okwu a, usoro ndị ahụ dị mgbagwoju anya iji tinye ihe ndị dị ndụ. Dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu na-emegharị ọnọdụ ọhụrụ, anyị enweghị ike ijide n'aka na ọ bụ otu omume ahụ ha nwere n'oge niile. Ọzọkwa, ọ gaghị ekwe omume ịkọwa omume nke ụdị ụmụ anụmanụ nwụrụ anwụ ma mara ma ọ dị ka nke ndị dị ugbu a, nde na nde ndị gara aga. Iji maa atụ, tupu a akpụrụ Age, ihe ndị dị ndụ ga-agbanwerịrị àgwà ha ka ha nwee ike ime mgbanwe iji kwekọọ n'ọnọdụ ndị dị ndụ ma dịrị ndụ. Mbugharị bụ otu n'ime akparamagwa nke jigidere n'oge mgbanwe niile nke ihe ndị dị ndụ, ebe ọ bụ ebumpụta ụwa achọrọ ịchọ ebe obibi ebe ha nwere ike mụta nwa ma nwee ezigbo ọnọdụ obibi.
Akụkọ banyere ala banyere ihe mere eme
Iji nweta ozi niile gbasara ihe mere na akụkọ ntolite, a na-eji ihe eji eme ihe na ịdị n'otu, bụ nke a na-agbachitere n'ọdịmma, usoro ihe omume na oke nke strata.
Dika ozi enwere ike inweta site na uzo ozo di iche iche, anyi nwere ihe ndia:
Ọnọdụ ha nwere n'ihe metụtara oke osimiri
Ọnọdụ okpomọkụ nke ha biri
Nkpuru osisi na umu anumanu di n'oge ahu
Oge ebe enwere mmeghari ihu igwe
Dịka ị pụrụ ịhụ, sayensị na-agba mbọ ịkọwa etu ụwa siri gbasaa taa. Actualism bụ ngalaba a nabatara nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Omume